Kudengenyeka kwenyika kwakasimba 6.9 muChile
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Akasiyana Nhau » Kudengenyeka kwenyika kwakasimba 6.9 muChile
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Chile Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kudengenyeka kwenyika kwakasimba kwakayerwa maminetsi gumi pa10 UTC nguva muna Chikumi 19.39 (3 min yapfuura) kuNorthern Chile nekudzika kwemakiromita 10
Epic centre iri muSan Pedro de Atacama muChile. San Pedro de Atacama iguta rakagadzwa panzvimbo yakaoma yakaoma mumakomo eAndes kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweChile. Nzvimbo yayo inoshamisa yakapoterera inosanganisira gwenga, dzimba dzemunyu, makomo anoputika, magiza, uye zvitubu zvinopisa. Valle de la Luna muLos Flamencos National Reserve iri padhuze kushushikana kwakafanana nemwedzi kwakaumbwa nematombo zvisina kujairika, jecha guru, uye makomo ane mitsetse yepingi.
Kana paine zviitiko zvakakosha zvinouya pamberi eTurboNews ichataura zvidzoreso.
Chero vaverengi mudunhu vanokurudzirwa emaimeri eTN ku [email inodzivirirwa]